Soosaarista Acoustic Movable Qaybta Nidaamka Wax Soo Saarka Nidaamka Darbiga | Albaabada
Keeri xalka hal-ka-hoy ee nidaamyada derbiga ee dhaqdhaqaaqa ee la-dhaqaajin karo ilaa 2004.
Qeybaha Glass Dhaqdhaqaaqa
Kiilka xalka ubane ee dabacsan
Iyada oo in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimada ah ee isku laabma iyo
derbiyada qaybinta ee is-riixaya iyo warshadaha gidaarka ee la dhaqaajin karo.
Hadafkayagu waa inaanu qancino macaamiisheenna tayo sare leh oo lagu kalsoonaan karo si loo hubiyo in macaamil kasta uu dareemi karo raaxo iyo kalsooni alaabteena si aad ah u heli kara codsiyadooda suuqa sababtoo ah guryaha wanaagsan. Waxay leeyihiin astaamo badan oo u baahan in la soo bandhigo iyo arji.
U habeeyay xalka daaqadaha / masraxa dhamaadka derbiga soosaarayaasha darbiga ee Shiinaha
Sida loo sameeyo Xiriirka Ku Saabsan ee Gumbashada Glamb ee Guluulka Haddii ay jiraan Windows-ka ama masrax dhinaca dambe ee derbiga, albaabka ayaa ku siinaya xalal dabacsan!Soo-saare iyo alaab-qeybiye: Guryaha Qaybta GuryahaAlbaab-gacmeedyada ayaa u habeeyay xalka daaqadaha / masraxa dhamaadka derbiga soosaarayaasha darbiga ee Shiinaha
Qaybaha Qaybinta Muraayadaha Miraayada Soo Saara ee Degdega ah
Albaabka albaabka waxay bixisaa macaamiisha caalamka ee nidaamyada gidaarka galaaska ee la dhaqaajin karo iyo jahwareerka xidhashada galaaska ee adeegga xafiiska, nala soo xiriir xalka hal-joog ah& oraah.
Xirfadleyaal kala duwan oo Gudi ah oo ku dhammeeya xulashooyinka soo-saareyaasha aqoon-isweydaarsiga ee albaabka
Albaab-galeenka Albaab-galeenka Gudiga Kala Duwan ee Gudiga Guddiga ayaa ka soo baxa soo-saareyaasha aqoon-isweydaarsiga ee albaabkaNooca Nooca ah ee Gudiga: Dhar: Dhar, maqaar, hpl, MDF / MARAME, Gloss rinji, alwaaxyo ah / rinjiyeyn, Golaha cad iwm.Soo-saare iyo alaab-qeybiye: Guryaha Qaybta GuryahaAlbaabka albaabka : Soo-saare khibrad leh oo xirfad leh oo tayo sare leh iyo Nidaamyada derbiga ee dhawaqa sare ee suuxinta SPOCY.More macluumaadka fadlan la xiriir: Mr.wen Allen (milkiilaha iyo Injineer)Albaabka laga soo bilaabo xulashooyinka guddiga ee kala duwan ee guddiga ee laga soo bilaabo shirkadda aqoon-isweydaarsiga ee Albaabka - Albaabka
derbiyada kalabeegaha ee muraayadaha madhan oo isu rogaya xafiiska
Glado qaybinta qawaaniinta oo jilicsan ee xafiiska. Shaygaani wuxuu leeyahay qiiqa ka hooseeya ee gaaska waxyeelada leh deegaanka. Waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa yareynta raad-yaraha kaarboonka. Albaabka waxaa loo soo saaray iyadoo la adeegsanayo aalado hal-abuur ah iyo qalab sida isbeddellada suuqa ugu dambeeyay& qaababka. Shaygu ma haysto agab sunta ah sida meerkurida iyo biraha kale ee halis ku ah deegaanka. Waxay ka kooban tahay oo keliya xeryahooda kiimikada oo mas'uul ka ah midabka iftiinkeeda, oo aan wax u geysan dadka isticmaala iyo deegaanka.
Dhameystirka jahwareerka isku-darka
CaadoAcoustic paneL iyo derbiga qaybinta ee dhaqdhaqaaqa, waxaan kugu lugeynaynaa nidaamka abuurista xalka oo dhan, oo laga soo bilaabo is-iibinta-iibinta, naqshadeynta, soo saarista, soo saarista rakibida.
Waxaan bixinaa sawirrada CAD iyo 3D. Waxaan qabanaa seddex weji oo Qc ah si aan u hubinno tayada wax soo saarka.
Waxaan had iyo jeer raacnay qawaaniinta caadiga ah ee geedi socodka wax soo saarka adag, waqtiga wax lagu badbaadinayo iyo qiimaha labada dhinacba isla markaana ay u keenaan dheefaha ugu badan ee adiga.
Waxaan si diiran kuugu soo dhaweynaynaa inaad soo booqato warshadeena si aan wax uga ogaano Gudiga acoustic iyo Darbiga Qaybtu ee dhaqdhaqaaqa wax soo saarka iyo qaababka wax soo saarka.
Maareeyaha Mashruuca ee loo xilsaaray ayaa hagi doona oo hagi doona mashruuca oo uu ku ordi doonaa anigoo aqoonsanaya ilaha loo baahan yahay, abaabulka iyo kula soo xiriirida adiga oo ka wakiil ah qandaraaslaha guud;
Waxaan dib u eegi doonnaa miisaaniyadaha, qorshayaasha, iyo sawirrada, oo waxaan sameyn doonaa booqashooyin goobta& Qiimaynta si loo go'aamiyo baaxadda iyo baahiyaha mashruucu si loo soo bandhigo qaabka ugu wanaagsan;
Maareeyaha Mashruuca Mashruuca ee loo xilsaaray ayaa hagi doona oo ka dhigi doona mashruuca oo uu ku ordi doonaa isagoo tilmaamaya ilaha loo baahan yahay, qabanqaabinta.
Waxaan si buuxda ugu dhex galineynaa badeecada adduunka ee macaamiisheena. Laakiin kuma qoynno kaliya astaamaha gaarka ah ee waaxda; Waxaan sidoo kale si qoto dheer ugala dhaqmeynaa su'aalo sida: "Maxaa ka dhigaya macaamiisha macaamiishayadu?" "Sideen ugu kicin karnaa damaca dhamaadka macaamiisha ee iibsashada macaamiisha?" Tani waa waxa aan kugu sameyn doono. Tani waa sida aan u leenahay mashruucaaga mashruuceena.
Baro waxyaabaha ku saabsan badeecada aan loogu talagalay adiga, sidaderbiga isku laabma iyoderbiga qaybinta mobilada, iwm., oo waxaad dareemi doontaa qaabeynta taxanaha ah.
Tuulada Heritage ee dabaqa 2aad ee Dammam Saudi Arabia
HADALKA TIANYUAN (XIAMEN) -GRAND BANQUET HALL (P1 & P2)
Faarujinta Yonghong Hotspring Resorts
Qaybta albaabka albaabka
Albaabka waa shirkad bixisa waxyaabo badan oo fiiro gaar ah leh tayada wax soo saarka. Xulashada ceyriinka xulashada, naqshadeynta, in la buuxiyo xirmo, waxaan had iyo jeer u qabanaa xakameyn tayo leh oo adag inta aan raacayno nidaamka wax soo saarka ee caalamiga ah.
-EenaDarbiga Qaybtu ee dhaqdhaqaaqaAlaabada waxaa lagu cadeeyay inay ka hor tagaan imtixaanka waqtiga oo si weyn ugu caansan kuwa ugu caansan macaamiisha kuwa guryaha leh ee milkiilayaasha hudheellada xiddigta, qaab dhismeedka caanka ah iyo wixii la mid ah. Ilaa hadda, waxaan ka gudubtay ISO 9001 shahaadada tayada caalamiga ah.
In ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku yimaadda derbiyada qaybinta iyo derbiyada jajabinta iyo warshadaha darbiga ee la dhaqaaqi karo,Gudiga Caadada Acoustic, Albaabka albaabka ayaa uruursaday waayo-aragnimo hodan ah iyo khibrad si ay u siiso macaamiisha alaabada tayada sare leh oo ay hubiyaan in macaamiisha ay helaan adeegga ugu wanaagsan ee lagu daboolo shuruudaha gaarka ah.
Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo booqato warshadeena ama aad noo soo dirto weydiimaha ku saabsan qiimaha badeecooyinka sidaderbiga isku laabmaiyo derbiga macdanta mobilada waqti kasta.